ဖုန်းခေါ်တဲ့အခါ နံပါတ်ရိုက်တဲ့ key pad ကို ဖောက်ထွင်းမြင်ရအောင်
Posted by yemintun86@gmail.com at 9:42 PM No comments:
Android phone တွေမှာ ဘထ္ဘရီ အားသွင့်းလို့ပူနေလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား ဒါလေးသုံးကြည့်
Posted by yemintun86@gmail.com at 10:27 PM No comments:
မိမိတို့ရဲ့ facebook ကိုပုံစံပြောင်းရအောင်
Posted by yemintun86@gmail.com at 9:39 PM 1 comment:
STEP 5: Again, confirm your decision.
Finally, FB will ask if you want to permanently delete your account.
You’re almost free. All you need to do is click “Okay” and the delete-o-matic at Facebook will zap your account. But wait! You’re not out of the Facebook woods yet....
“You are about to permanently delete your account. Are you sure?”
This scary red text is designed to make people‘s moms turn back. You are not your mom. Continue withahigh head and clear conscience. Freedom is onlyafew keystrokes away -- type in your password, answer the captcha and click “Okay”.
STEP 3: Tell Facebook you want to delete your account.
OK, now that you‘ve taken care of business and put the word out, it‘s time to quit.
Go to this top-secret URL:
This is where Facebook will try to con you into staying. Don‘t buy their dirty lies. Some of your friends may also have told you not to leave. They are not your real friends, especially that guy you only worked with for two months and always writes updates about mountain biking.
Click on “Submit” to begin the wild ride.
Posted by yemintun86@gmail.com at 10:24 PM No comments:
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများအတွက်ပါ Mandalay fM apk
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ရွှေနိုင်ငံကြီးအကြောင်း သိနိုင်စေဖို့
Posted by yemintun86@gmail.com at 10:01 PM No comments:
ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးဖိုအတွက်ပါAnimation Desktop Wallpaper Maker
ဒါကတော့ သူငယ်ချင်းတို့ Wallpaper လေးတွေကို Animation လေးတွေနဲ့လန်းလန်းလေးသုံးချင်သူများ အတွက်အကြိုက်တွေ့မဲ့ Animated Wallpaper Maker ဆိုတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..။
Posted by yemintun86@gmail.com at 10:00 PM No comments:
android ဖုန်းကို Shake ပြီး ကင်မရာ ဖွင့်မယ် . . . .
တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ် . . . . .
တစ်စုံတစ်ခုကို ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် ကင်မရာဆီကို ရောက်အောင် သွားနေရင်းနဲ့ လွတ်သွားတာမျိုးကို ကြုံဖူးမှာပါ . . . .
Posted by yemintun86@gmail.com at 9:57 PM No comments:
လောကဇာတ်ခုံ၊ ဤလူ့ဘုံ၌ မျိုးစုံကကြ ၊ မာန်မာနနှင့် ငါကရာဇာ ၊ ငါဟာသူဌေး ၊ ငါလှပဂေးဟု ငါသွေးတက်ကြွ ၊ လူ့ဗလာတို့ များလှဖြာဖြာ ၊ အဝိဇ္ဇာနှင့် တဏှာဘီလူး ၊ အမှောင့်ပူး၍ ကျူးကျူးကျော်ကျော် ၊ ဂုဏ်ကိုဖေါ်လျက် မော်မော် မောက်မောက် ၊ ငါတစ်ယောက်သာ မိုးအောက်တလွှား ၊ရွှေကိုယ်လားဟု ထင်မှားမလွဲ ၊ သို့စဉ်စွဲလည်း ဇာတ်ပွဲပြီးက ၊ ပြည်ဖုံးချသော် သုဘရာဇာ ၊ မြေအောက်မှာပင် ဘာသာလူမျိုး ၊ ချိန်မထိုးပဲ ပုတ်သိုးခန္ဓာ ၊ မြုပ်ရရှာသည် ဘယ်မှာ ငါဟု ရှိအံ့နည်း။ (လယ်တီဆရာတော်ကြီး)
Blogger yemintun ၁၂.၄.၂၀၁၂တွင်တည်ထောင်သည်
face book ကိုlike လုပ်ခြင်းဖြစ်အားပေးပါ
STEP 5: Again, confirm your decision. Finally, FB will ask if you want to permanently delete your account. You’re almost free. All y...
ဓာတ်ပုံကို ဘောင်ခတ်လို့ ရတဲ့ ဆော့ဝဲ ( ပုံပေါ်မှာ မြန်မာစာ ရေးနိုင်သည်)
ဒီရက်ပိုင်းမအားလို.သိပ်မတင်ဖြစ်ဘူးဒီနေ.တော.အဆင်ပြေမယ်ထင်တာလေးတွေသွားမလာပါတယ်သုံးကြည်.ပါ ဒီဆော့ဝဲက ဓာတ်ပုံဘောင်ဒီဇိုင်း သီးသန့် ပါ ...
http://free-translator.imtranslator.net/speech.asp# ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက်မှန်မမှန်သိရအောင် စစ်...
http://www.mmitd.com/ မြန်မာ အိုင်တီ ဖွံ့ဖြိုးမှု
ကျတော်တို့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ သွားသုံးတဲ့အခါ key logger ရန်ကလွတ်အောင် ဒီနည်းလေးသုံးလိုက်ရင် တော်တော်အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ အောက်က ပေးထာ...
notepad virus hack
သူငယ်ချင်းရဲ့ Keyboard ကို hack တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှတော့ မထိခိုက်ပါဘူး။ ဒါလေးကို Run လိုက်ရင်တော့ keyboard နဲ့ စာရိုက်ရင် ဘာတေ...
Photoshop CS5 စာအုပ် နှင့် အခြားသော Photoshop စာအုပ်ပေါင်းများစွာ (မြန်မာလို)
Photoshop CS5 ကို အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အရှင်းဆုံးဖြစ်အောင် တင်ပြထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ ..။မြန်မာနည်းပညာ လူငယ်များအတွက် စေတနာရှင် ကို ရဲရှင်...
မသိသေးတဲ့ လူတွေအတွက်ပါဗျာ။ Gtalk မှာ ကိုယ် မ chat ချင်တဲ့/မကျေနပ်တဲ့ သူကို block လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ် ...
ထောင်ဖောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော့်ကို တစ်မျိုးမထင်ကြနဲ့ဦး .ထောင်ဖောက် တယ်ဆိုတာက တင်စားလိုက်တာ .
ထောင်ဖောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော့်ကို တစ်မျိုးမထင်ကြနဲ့ဦး .ထောင်ဖောက် တယ်ဆိုတာက တင်စားလိုက်တာ . ကျွန်တော်တို့ apple ကနေ ထုတ်တဲ့ iphone ...